Iprojekthi yeTitan, iinkcukacha ezithe kratya malunga nemoto ezimeleyo ka-Apple | Ndisuka mac
Iprojekthi yeTitan, iinkcukacha ezithe kratya kwimoto ezimeleyo ka-Apple
Ukuba iApple ibisebenza kumzi mveliso wokuqhuba imoto okwethutyana ayothusi. Ukongeza, sele siyazi ukuba inkampani ekhokelwa nguTim Cook ayicingi ngokwenza iimoto kwasekuqaleni, kodwa bafuna ukhathalelo lwenxalenye isoftwe. Oko kukuthi, zinikezele kwelona nxalenye libalaseleyo lemoto. Le projekthi yaziwa phantsi kwegama le «Project Titan».
Nangona kungesosihlandlo sokuqala ukuba kuvezwe imifanekiso yeemoto ezizimeleyo zika-Apple, kuyinto entsha ukuzibona kwividiyo kwaye kuphawulwe- kwaye kurekhodwe- ngu IMacCallister Higgins (Umququzeleli we inkampani ezimeleyo yeeteksi Uhambo). Kule kliphu ungabona ukuba yeyiphi i-arsenal efakwa ngu-Apple eluphahleni lwezithuthi ezikhethiweyo. Kule meko Le yimodeli yeLexus Rh450.
Ukuya kufuna ngaphezulu koonobumba abali-140 ukuya ngaphezulu kweProjekthi yeTitan. Ndiyibiza ngokuba "Into" @PastortheDJ @SABCiindaba
-MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 Oktobha ka-2017
Kwividiyo ebhalwe nguMacCallister kwiprofayile yakhe ye-Twitter, siyabona ukuba imivalo efakwe yiLexus eluphahleni igcwele zizenzi. Ngokunjalo, umseki-nkampani weeteksi naye uphawula ukuba, ngokungafaniyo nezinye iinkampani, I-Apple inokugcina yonke idatha eqokelelwe kuvavanyo lwe- «Projekthi yeTitan» kulwakhiwo olufanayo lweemoto.
Kwelinye icala, ukusuka TechCrunch Kubonakala ngathi bafuna ukunika umba kumcimbi kunye nemifanekiso evuziweyo. Kwaye kungenxa yoqwalaselo lwangoku- kunye nezinto ezikhethelwe iimvavanyo-, kunokwenzeka kakhulu ukuba iApple iyilungelelanise neemodeli ezahlukeneyo zeemoto; koko kukuthi, ukwazi ukuvavanya iintlobo ezahlukeneyo zezithuthi: iimoto, iiSUV, iiveni ... iilori? Ngokukwanjalo, bakwabonisa ukusuka kwitekhnoloji eyaziwayo, ukuba iApple inokuba icinga ngokuvelisa izixhobo kwindlela efanayo. Ukongeza, ukubona ukuba kuya kuba lula kangakanani ukunyusa / ukwehlisa iisenzi, kunokwenzeka ukuba uCupertino afumane enye indawo apho anokuqokelela khona ukubetha okungaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iprojekthi yeTitan, iinkcukacha ezithe kratya kwimoto ezimeleyo ka-Apple
Ngomso iVenkile entsha yeApple eChicago iyavula